मौसमविद्को सुझाव : जीउ र बिउ जोगाउनुहोस् ! - Janakpur Today
मौसमविद्को सुझाव : जीउ र बिउ जोगाउनुहोस् !
काठमाडौं, असार २७ गते: मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका २५ जिल्लामा साताभर मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने भविष्यवाणी गरेको छ । सक्रियता बढाउँदै गएको मनसुनले देशभर आफ्नो फैलावट बढाइसकेको अवस्थामा २५ जिल्लामा बढी पानी पर्ने भविष्यवाणी गरेको हो ।
लक्ष्मी बैंकले महोत्तरीको सर्पदंशमा अढाई लाखको गरे सहयोग
अविरल वर्षाका कारण जनकपुर जलमग्न (फोटो फिचर)